Somali daily News – Guddoomiyaha Jaamacadda Plasma Oo Loo Doortay Wakiil Goboleedka Bariga Afriga “Daawo Sawiro”
Ururkan oo ay ku midaysan yihiin 381 Jamacadood oo ku yaala qaarada Africa ayaa waxaa hogaamiya gole sare oo ka kakooban 10 wakiil goboleed oo matalaya shan gobol ee dhacaBariga, Galbeedka, Koofurta, Waqooyiga & Bartamaha qaarada Afrika.
Plasma waxaa loo doortay 4 sano ee soo socota (2017-2021) wakiil Goboleedka Bariga Afrika oo ay hoos imanayaan dhamaan Jaamacadaha ku yaala in ka badan 10 dal oo kala ah ; Somaaliya, Kenya, Tansaniya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan ,South Sudan , Ethopiya , Eretereya, Jabuuti .
Waa markii ugu horeysay abid oo ay Soomaliya ku guulaysato Kursi Gobeleedka golaha sare ee hogaanka midowga Jaamacadaha Africa (AAU). Urarkan ayaa sanadkan u dabaal degay sanad guuradiisii 50-tanaad( 1967-2017) taas oo kusoo beegantay Shirweynihiisii 14-naad ee afartiisanaba mar lagu qabto dal ka mid ah dalalka qaarada afrika . waxaa sanadkan lagu qabtay 05- 08 June 2017 Caasimda dalka Ghana Accra oo ay ku taalo Xarunta weyn ee Ururka midowga Jaamacadaha Afrika (AAU).
Jaamacada Plasma ayaa shanti sano ee lasoo dhaafay ahayd wakiil sharafeedka Jamacadaha Soomaaliya xaga xariirka ururuda caalamiga ee Jamacadaha dunida, iyadoo doorashada kursigan cusub ee afarta sano ee soo socata uu keeni doono in uu sii xogaysto xiriirka caalamiga ah ee jamaacadaha Soomaaliya iyo jamaacadaha dunida , lana ixtiraamo Jaamacadaha dalka Soomaaliya.